Wuu Ka Fiican Yahay Neymar Jr-Giorgio Chiellini Oo Sharaxay Wixii Uu Dareemay Maalintii Ugu Horaysay Ee Uu Arkay Mbappe. - Gool24.Net
Wuu Ka Fiican Yahay Neymar Jr-Giorgio Chiellini Oo Sharaxay Wixii Uu Dareemay Maalintii Ugu Horaysay Ee Uu Arkay Mbappe.
17/05/2020 Mahamoud Batalaale
Taxanaha buuga Giorgio Chiellini ayaa noqday mid todobaadyadii ugu danbeeyay waxyaabo badani ka soo baxeen waxaana haddaba la shaacinayaa qaybo ka mid ah qoraalka buuga cusub ee uu Chiellini qaybo badan muranka ku abuuray.
Buuga cusub ee Giorgio Chiellini ayaa lagu shaaciyay hadalkii ka soo booday afkiisa markii ugu horaysay ee uu arkay Kylian Mbappe oo ciyaaraya waxayna ahayd ciyaartii aduunka ka yaabisay ee Manchester City iyo Monaco ee tartanka Champions League.
Xili ciyaareedkii 2015/16 kii waxay kooxda AS Monaco oo uu ka tirsanaa Kylian Mbappe ay layaab ku dhigtay kooxda Guardiola ee Manchester City wuxuuna waqtigaas Cheillini markii ugu horaysay daawaday Mbappe oo ciyaaraya wuxuuna buugiisa ku soo bandhigay waxyaabihii layaabka ahaa ee uu ku hadlay.
Giorgio Chiellini ayaa buugiisa ku shaaciyay in habeenkii uu arkay Kylian Mbappe oo Manchester City ka hor imanayay in uu agaasimaha kooxdiisa Juventus ee Fabio Paratici uu waydiiyay cida uu wiilkani yahay iyo aduunyada uu ka yimid.
Waxa uu Giorgio Chiellini xusay in marka Messi iyo Ronaldo ay saaxada ugu saraysa ee kubbada cagta ka baxaan in Mbappe uu noqon doono xidiga xiga ee marar badan ku guulaysan doona abaal marinta Ballon d’Or.
Giorgio Chiellini oo arintan buugiisa kaga hadlaya ayaa qoray: “Waa kuma xidiga aaduunka ee xiga ee urursan doona Ballon d’Or marka ay Cristiano iyo Messi ciyaarista joojiyaan? Waa xidiga reer France ee Kylian Mbappe, waa ciyaartoy khaas ah”.
Markii ugu horaysay ee uu Giorgio Chiellini daawaday Mbappe ayuu si gaar ah uga hadlay wuxuuna yidhi: “Markii ugu horaysay ee aanisaga TV-a ka arkay waxay ahayd kulankii Champions League ee 2015/16 ee intii lagu jiray kulankii Manchester City iyo Monaco-cajiib ayuu ahaa”.
Hadalkii ka soo booday afka Giorgio Chiellini ayuu ku sharaxay:” Dhamaadka qaybtii hore waxaan Fabio Paraticis waydiiyay: “Isagu waa ayo? Aduunyadee ayuu ka yimid?”.
Jawaabtii Fabio uu siiyay Giorgio Chiellini ayuu qoraalkiisa ku yidhi: “Fabio waxa uu ku jawaabay: ‘Haa waan garanayaa. Waqti ayaanu isaga naqaanay,waa gool dhaliye aan la joojin karin, waxa uu ahaa 18 sano jir kaliya”.
Giorgio Chiellini oo qoraalkiisa Mbappe sii wata ayaa yidhi: “Anagu waxaanu xili ciyaareedkaas Yurub ku wajihi karnay isaga ee afar dhamaadkii. Hadda isagu waa 21 sano jir, haddaba waa Championska aduunka, xawaare, farsamo dilaa, isaga waxba kama maqna”.
Giorgio Chiellini ayaa qoraalkiisa Mbappe ku soo xidhay: “Sidoo kale waxaan filayaa in Mbappe uu ka fiican yahay Neymar oo qaab ciyaareedkiisu ka joogtaysan yahay, mustaqbalka isaga ayaa iska leh”.